မြန်မာ ပါဝင်ယှဉ်ပြိုင်နေတဲ့ ဖိလစ်ပိုင် ဆီးဂိမ်း အထစ်အငေါ့တွေ ရှိနေ
မြန်မာ ပါဝင်ယှဉ်ပြိုင်နေတဲ့ ဖိလစ်ပိုင် ဆီးဂိမ်း အထ...
28 พ.ย. 2562 - 23:48 น.
ဆီးဂိမ်းအားကစားပွဲတော်ကြီး တရားဝင် မစတင်ခင် ရက်ပိုင်းအလိုမှာပဲ အားကစားရုံအသစ်ကြီးထဲမှာ ဆောက်လုပ်ရေးတွေ လက်စမသတ်နိုင်သေး
ဆီးဂိမ်း အရှေ့တောင်အာရှ အားကစားပွဲဟာ အိုလံပစ် ဒါမှမဟုတ် ဖီဖာ ကမ္ဘာ့ဖလား ပွဲတွေလောက် တခြားလူတွေ စိတ်ဝင်စားချင်မှ စိတ်ဝင်စားကြမှာ ဖြစ်ပေမဲ့ အရှေ့တောင် အာရှ ဒေသတွင်းမှာတော့ ဒါဟာ သိပ်ကို လူကြိုက်များတဲ့ ပွဲ ဖြစ်ပါတယ်။
ဆီးဂိမ်းပွဲဟာ အိမ်ရှင်နိုင်ငံရဲ့ ဖန်တီးနိုင်မှုစွမ်းအင်နဲ့ စိတ်ကူးရုပ်ပုံလွှာတို့ကို ချပြတဲ့ ပွဲ ဖြစ်သလို ဒါ့ထက် ပိုကြီးတဲ့ ကမ္ဘာ့ အားကစားပွဲတွေမှာ ဝင်ပြိုင်နိုင်ဖို့ အားကစားသမားတွေ ပြင်ဆင်တဲ့ ပွဲလို့လည်း မှတ်ယူထားကြပါတယ်။
ဒါပေမဲ့ ဒီနှစ် အိမ်ရှင်ဖြစ်တဲ့ ဖိလစ်ပိုင်နိုင်ငံအတွက်ကတော့ အဆင်ပြေပြေ ချောချောမွေ့မွေ့ ဖြစ်လာပုံ မရပါဘူး။
အခု သီတင်းပတ်ကုန်မှာ ကျင်းပမယ့် နှစ် ၃၀ မြောက် ဆီးဂိမ်း ပွဲတော် စခါနီး အချိန်မှာတင် အသုံးစရိတ်နဲ့ ပတ်သက်လို့ စည်းမျဉ်း ဖောက်ဖျက်တာတွေ၊ အပြီးသတ် မဆောက်နိုင်တဲ့ အဆောက်အအုံတွေ၊ အားကစားသမားတွေအပေါ် ဆက်ဆံမှု ညံ့ဖျင်းတာတွေ ရှိတယ် ဆိုတဲ့ စွပ်စွဲချက်တွေနဲ့ ပတ်သက်လို့ အချေအတင် အငြင်းပွားစရာတွေ ဖြစ်လာခဲ့ပါတယ်။
စာရင်းဇယား မှားယွင်းချွတ်ချော်မှုတွေကြောင့် အားကစားသမားတွေ ကြမ်းပြင်ပေါ်မှာ ဒါမှမဟုတ် လေဆိပ် ခုံတန်းတွေပေါ်မှာ အိပ်နေကြရတဲ့ ပုံတွေ လူမှုကွန်ရက် စာမျက်နှာတွေပေါ်မှာ ပလူပျံနေပါတယ်။ #SEAGamesFail ဆိုတဲ့ ဟက်ရှ်တက်ဂ် ခေါင်းစဉ်က လူကြည့်များလာနေပါတယ်။
ဒီဆီးဂိမ်းပွဲအတွက် စင်္ကာပူ အသင်းရဲ့ စားဖိုမှူး ဂျူလီယန်နာ စီအောင်းက အစားအသောက်တွေ အေးစက်နေတာ၊ မွတ်ဆလင် အားကစားသမားတွေအတွက် ဟာလာလ် အစားအစာ ရွေးစရာ သိပ်မရှိတာ တွေကို ဖြေရှင်းပေးဖို့ ပွဲစီစဉ်သူတွေထံ မကျေနပ်တဲ့ စာတစောင် ပေးပို့ထားပါတယ်။
တခါ ဗီဒီယိုတစ်ခုထဲမှာ မကြာသေးခင်က ပြန်ပြင်ထားတဲ့ မနီလာမြို့ အားကစားရုံကြီးထဲက အခန်းငယ်လေးတစ်ခုထဲမှာ အိမ်သာ နှစ်ခုတွဲပြီး အတူထည့်ဆောက်ထားတာ တွေ့ရပါတယ်။
ဒီဗီဒီယိုကို ကြည့်သူ သိန်းပေါင်းများစွာ ရှိခဲ့ပါတယ်။
ဒါပေမဲ့ ဖိလစ်ပိုင် အားကစား ကော်မရှင်ကတော့ ဒေသခံ သတင်းထောက် အန်ဂဲ မိုဗီဒိုက ဒီဗီဒီယိုကို အတုလုပ်ပြီး ABS-CBN သတင်းဌာနကို ပို့ခဲ့တာလို့ ပြောပါတယ်။ ဒီဗီဒီယိုဟာ ဟိုးတုန်းက ရိုက်ထားတဲ့ ဗီဒီယို ဖြစ်တယ်လို့ ဆိုပါတယ်။
ဒီသီတင်းပတ်အတွင်း ပေါ်ထွက်လာတဲ့ စွပ်စွဲချက်တွေက ဖိလစ်ပိုင်အစိုးရကို ဒေါသထွက်စေခဲ့ပြီး ဆီးဂိမ်းပွဲတော်ကြီး ပြီးသွားတာနဲ့ စုံစမ်းစစ်ဆေးမှု တစ်ခု လုပ်ဖို့ သမ္မတ ရိုဒရီဂို ဒူတာတေးက ညွှန်ကြားခဲ့ရတဲ့အထိ ဖြစ်ခဲ့ရပါတယ်။
ပွဲမစခင် ကြိုတင်ပြီး သတင်းတု၊ သတင်းမှားတွေ ဖြန့်ချိခဲ့တဲ့အတွက် အထင်အမြင်မှားမှုတွေ ဖြစ်စေတယ်လို့ ပွဲစီစဉ်တဲ့ ကော်မတီက ပြောနေပြီး ဒီကိစ္စကိုလည်း ထည့် စုံစမ်းစစ်ဆေးမယ်လို့ ဆိုပါတယ်။
ဆီးဂိမ်း ပွဲစီစဉ်ရေး ကော်မတီ ဥက္ကဋ္ဌဟာ ၂၀၁၆ ရွေးကောက်ပွဲမှာ မစ္စတာ ဒူတဲတေးနဲ့အတူ ဒုတိယ သမ္မတအဖြစ် ဝင်ပြိုင်ခဲ့တဲ့ အယ်လန် ပီတာ ကိုင်ယက်တာနို ဖြစ်ပြီး လက်ရှိမှာ ကွန်ဂရက် လွှတ်တော် ဥက္ကဋ္ဌအဖြစ် ဆောင်ရွက်နေပါတယ်။
အဆင်မပြေမှုတွေအတွက် အားကစားသမားတွေကို မစ္စတာ ကိုင်ယက်တာနို က တောင်းပန်စကား ပြောခဲ့ပေမဲ့ ပွဲ ပြင်ဆင်မှုဟာ ကသောင်းကနင်း နိုင်တယ် ဆိုပြီး မီဒီယာတွေရဲ့ ဖော်ပြချက်တွေကိုတော့ အလေးမထားသလို ပြောသွားခဲ့ပါတယ်။
ပွဲပြင်ဆင်ရာမှာ အခုလို အထစ်အငေါ့ ချွတ်ချော်မှုတွေ ဖြစ်ခဲ့ရတာဟာ ဖိလစ်ပိုင်နိုင်ငံ ပြည်တွင်း အသုံးစရိတ် ဘတ်ဂျက်အတည်ပြုနိုင်ရေး ကိစ္စတွေက တစိတ်တပိုင်း ပါတယ်လို့ မစ္စတာ ကိုင်ယက်တာနို က အပြစ်ပုံချခဲ့ပါတယ်။
နိုဝင်ဘာလ ၃၀ ရက်မှာ အခမ်းအနားနဲ့ တရားဝင် ဖွင့်လှစ်မယ့် ဆီးဂိမ်း ပွဲတော်ရဲ့ မီးရှူးတိုင်ထိပ်က အိုးအတွက် ဒေါ်လာ ၉ သိန်း အကုန်ခံတာဟာ မလိုဘဲ ပုံအော သုံးတာ ဆိုပြီး အတိုက်အခံ လွှတ်တော် အမတ်တစ်ဦးက မေးခွန်းထုတ်ခဲ့ရာကနေ အချေအတင် အငြင်းပွားစရာတွေ ပထမဆုံး စတင်ပေါ်ထွက်ခဲ့တာပါ။
ဆီးဂီးပွဲတော်ရဲ့ မီးရှူးတိုင်ထိပ်က အိုးအတွက် ဒေါ်လာ ၉ သိန်း အကုန်ခံ ဆောက်ခဲ့
တစ်ကြိမ်ထဲ သုံးမယ့် မီးရှူးတိုင် အိုးတစ်ခုအတွက် ကုန်ကျခဲ့တဲ့ ဒီငွေနဲ့ စာသင်ခန်း ၅၆ ခန်း ဆောက်လို့ ရတယ်လို့ ဆီးနိတ်လွှတ်တော် အမတ်အနည်းစုရဲ့ ခေါင်းဆောင် ဖရန်ကလင်း ဒီရီလွန် က ပြောပါတယ်။
မစ္စတာ ကိုင်ယက်တာနို ကတော့ ဒါဟာ အနုပညာဖန်တီးမှု တစ်ခု ဖြစ်တယ် ဆိုပြီး ဆောက်လုပ်ရေး အတွက် သုံးခဲ့တဲ့ ငွေတွေနဲ့ ပတ်သက်လို့ ကာကွယ် ပြောသွားခဲ့သလို ၂၀၁၅ ခုနှစ်တုန်းကတုန်းကလည်း စင်္ကာပူနိုင်ငံက မီးရှူးတိုင် အိုးအတွက် ဒေါ်လာ ၁ ဒသမ ၂ သန်း သုံးခဲ့တာကို ထောက်ပြသွားခဲ့ပါတယ်။
သတင်းသမားတွေကို သတင်းယူခွင့်ပြုတဲ့ စနစ်ကလည်း ကသောင်းကနင်း နိုင်ခဲ့တယ် ဆိုပြီး သတင်းထောက်တွေကလည်း ဒီသီတင်းပတ်မှာ မကျေမနပ် တိုင်တန်းခဲ့ကြပါတယ်။
"ဆီးဂိမ်းမှာ လာ သတင်းယူခွင့် လျှောက်လွှာကို ပြီးခဲ့တဲ့ နှစ်လကျော်လောက်ကတည်းက ပို့ထားခဲ့တာပါ။ ဝင်ခွင့်ပြုကြောင်း အွန်လိုင်းပေါ်မှာ အတည်ပြုခဲ့ပြီး နောက်ထပ် အီးမေးလ် နှစ်စောင် ရေးခဲ့ပေမဲလည်း တရားဝင် ခွင့်ပြုစာကို ခုချိန်ထိ မရသေးပါဘူး။ဒီကိစ္စကို ဖြေရှင်းဖို့ မနီလာမြို့က မီဒီယာရေးရာ ဌာနဆီ ဗုဒ္ဓဟူးနေ့တုန်းက ကိုယ်တိုင် သွားခဲ့တော့ စာရွက်ပရင့် ထုတ်တာတွေ ပုံနေလို့ သတင်းယူခွင့််လက်မှတ် ထုတ်ဖို့ နောက်ကျခဲ့ရတာလို့ ပြောပါတယ်။ အဲဒီအစား သီတင်းနှစ်ပတ် ဆီးဂိမ်းပွဲအတွက် တစ်ရက်စာ ဝင်ခွင့် လက်မှတ် နှစ်စောင် ထုတ်ပေးပါတယ်။ နောက်နေ့တွေအတွက် သတင်းယူချင်ရင် ဝင်ခွင့် ထုတ်ပေးတဲ့ ဌာနကို ထပ်သွားဖို့ လိုတယ်ဆိုပြီး ပြောပါတယ်" လို့ ဘီဘီစီ သတင်းထောက်က ပြောပြပါတယ်။
ဘောလုံးပွဲတွေ ကစားနေတဲ့ နေ့မှာ အားကစားရုံကြီးထဲမှာ အလုပ်သမားတွေက ကော်ဇောတွေ ခင်းနေကြဆဲ
ရထားတဲ့ ဝင်ခွင့်လက်မှတ်တွေထဲက တစ်ခုကို ပြပြီး ဖိလစ်ပိုင်နဲ့ မြန်မာ ဘောလုံးပွဲ မတိုင်ခင် အားကစားရုံ အသစ်စက်စက်ထဲ ဝင်သွားခဲ့ပါတယ်။
အိုလံပစ်ပွဲတွေလိုပဲ ဆီးဂိမ်း ဘောလုံးအုပ်စုပွဲတွေကို ဖွင့်ပွဲ အခမ်းအနား မတိုင်ခင် စကစားလေ့ ရှိပါတယ်။
ဘောလုံးပွဲ ကစားနေတဲ့ နေ့မှာတောင် အားကစားရုံကြီးထဲမှာ အလုပ်သမားတွေ အလုပ်လုပ်နေကြဆဲ ဆိုတာ တွေ့ရပါတယ်။
ဘောလုံးကွင်းဘေးနေရာ၊ အားကစားရုံနဲ့ ကွင်းလယ်တွေကတော့ ကြည့်လို့ ကောင်းပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ ပွဲမစခင် ဘောလုံးသမားတွေ ထွက်လာတဲ့ စင်္ကြန်တလျှောက်မှာတော့ အလုပ်သမားနှစ်ယောက်က ကြမ်းပြင်ပေါ်မှာ ကော်ဇောအနီ တစ်ခုကို ခင်းဖို့ တိုင်းတာ တွက်ချက် အလုပ်ရှုပ်နေတာ တွေ့ရပါတယ်။
ဖိလစ်ပိုင် လက်ရွေးစင် အသင်းရဲ့ အဝတ်လဲခန်းကိုလည်း A4 အရွယ် စက္ကူနဲ့ ဆိုင်းဘုတ် ကပ်ထားပြီး အခန်းပေါ်တက်တဲ့ လှေကားထစ်တွေကိုလည်း ကတ်ထူပုံး အပြားတွေနဲ့ ဖုံးထားပါတယ်။
ဖိလစ်ပိုင် လက်ရွေးစင် ဘောလုံးအသင်းရဲ့ အဝတ်လဲခန်းကို A4 အရွယ်စာရွက်နဲ့ ဆိုင်းဘုတ်ကပ်ထား
အခန်းထဲ ဝင်တဲ့ လှေကားထစ်တွေပေါ်မှာ ကတ်ထူပုံး အပြားတွေနဲ့ ဖုံးထား
အဲဒီရဲ့ နှစ်ခန်းကျော်မှာတော့ အဝတ်လဲခန်းတစ်ခန်း ရှိပြီး ခုချိန်ထိ ဆောက်လုပ်နေဆဲ တွေ့ရပါတယ်။ လျှပ်စစ်ဝိုင်ယာကြိုးတွေလည်း မျက်နှာကြက်ပေါ်ကနေ တွဲလောင်း ကျနေကြပြီး ကြွေပြားတွေ တပ်ဖို့ ကျန်နေသေးတဲ့ နံရံတွေကလည်း အင်္ဂတေတွေ မခြောက်သေးဘဲ ရှိနေပါတယ်။
အမေရိကန်ရဲ့ ကိုလိုနီ လက်အောက်ခံ နိုင်ငံတစ်ခု ဖြစ်ခဲ့ဖူးတဲ့ ဖိလစ်ပိုင် နိုင်ငံဟာ လက်ဝှေ့နဲ့ ဘတ်စကက်ဘော ကို အထူး စိတ်ဝင်စား အားပေးကြပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ လက်ရွေးစင် ဘောလုံးအသင်းကိုတော့ အထိုက်အလျောက်သာ အားပေးတာ တွေ့ရပါတယ်။
တခြား အရှေ့တောင် အာရှ နိုင်ငံတွေမှာတော့ ဘောလုံးကို စိတ်ဝင်စား အားပေးမှု တရှိန်တိုး တိုးပွားလာနေပြီး လက်ရွေးစင် ဘောလုံးသမားတွေဟာ လူမှုကွန်ရက်တွေပေါ်မှာ လူအများ အားပေးတဲ့ နာမည်ကြီး ဆယ်လီတွေ ဖြစ်လာနေပါတယ်။
ဒါ့ကြောင့် အရှေ့တီမောနဲ့ ကမ္ဘောဒီးယား လက်ရွေးစင် ဘောလုံးသမားတွေ လေယာဉ် နောက်ကျလို့ အခက်အခဲတွေ ကြုံတွေ့နေရတဲ့ ပုံတွေကို ဒေသတွင်း လူမှုကွန်ရက်တွေပေါ်မှာ အချင်းချင်း ဖြန့်ခဲ့ကြတာ ဖြစ်ပါတယ်။
အားကစားရုံထဲက လက်စမသတ်ရသေးတဲ့ အိမ်သာတွေ
အားကစားရုံ သွားအပြီးမှာ မစ္စတာ ဒူတာတေးရဲ့ ပြောခွင့်ရပုဂ္ဂိုလ် ဆယ်ဗေးဒိုး ပါနယ်လို နဲ့ စကားပြောခဲ့ပါတယ်။
အားကစားသမားတွေ ဘာမှ စိတ်ပူစရာ မလိုဘူးလို့ သူက ပြောခဲ့ပါတယ်။
သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးနဲ့ အရောက် နောက်ကျတာတွေက ဖြစ်နေကျပါပဲလို့ မစ္စတာ ပါနယ်လိုက ပြောပါတယ်။
ကမ္ဘာ့ တခြားနေရာတွေမှာလည်း ဒါမျိုး နေ့စဉ် ဖြစ်နေတာပဲ။ ဒါပေမဲ့ တချို့ ကိစ္စတွေနဲ့ ပတ်သက်လို့တော့ ပွဲစီစဉ်သူတွေက တောင်းပန်ခဲ့ပြီးဖြစ်ပြီး နောင်မှာ ဒါ့ထက် ပိုကောင်းအောင် လုပ်သွားဖို့ သူတို့ ကတိပြုထားပါတယ်လို့ ဆိုပါတယ်။
ရေပြင် ပိုလိုပွဲ ကျင်းပမယ့် ရေကူးကန်ကတော့ အသင့်ဖြစ်နေတာကို ကြာသပတေးနေ့က တွေ့ရ
ပွဲ ပြင်ဆင်တဲ့ ကိစ္စတွေအကြောင်း သတင်းတချို့ကတော့ တိကျသေချာမှု မရှိဘဲ သတင်းမှားတွေ ဖြစ်တယ်လို့လည်း မစ္စတာ ပါနယ်လိုက ပြောပါတယ်။
ဒီတော့ ဒီဆီးဂိမ်းပွဲဟာ ဖိလစ်ပိုင်နိုင်ငံရဲ့ စွမ်းအားကို ထုတ်ပြနိုင်တဲ့ ပွဲ ဖြစ်လာမလား၊ သမ္မတ ဒူတာတေးရဲ့ အုပ်ချုပ်မှုကို တကယ့် အစစ်အမှန် ထင်ဟပ်ပြနိုင်မှာလား လို့ မေးကြည့်တော့ မစ္စတာ ပါနယ်လို က "မဆိုင်ပါဘူး" လို့ ပြန်ဖြေခဲ့ပါတယ်။
သမ္မတ ဒူတာတေးဟာ နိုင်ငံ့ခေါင်းဆောင်အဖြစ် စွမ်းစွမ်းတမံ ဆောင်ရွက်နေပါတယ်။ ဆီးဂိမ်းမတိုင်ခင် ချွတ်ချော် လိုအပ်မှုတချို့ကြောင့်တော့ သမ္မတ ဒူတဲတေးရဲ့ လုပ်ဆောင်နိုင်မှုကို ထင်ဟပ် တိုင်းတာလို့ မရပါဘူးလို့ ပြန်ဖြေခဲ့ပါတယ်။
อัลบั้มภาพ မြန်မာ ပါဝင်ယှဉ်ပြိုင်နေတဲ့ ဖိလစ်ပိုင် ဆီးဂိမ်း အထစ်အငေါ့တွေ ရှိနေ